बर्ष २०७५ लाई सम्झन लायक बनाएका ‘हिट’ गीतहरु, जो आम नेपालीको ओठमा गुञ्जिरहेका छन् - VOICE OF NEPAL
बर्ष २०७५ लाई सम्झन लायक बनाएका ‘हिट’ गीतहरु, जो आम नेपालीको ओठमा गुञ्जिरहेका छन्
१ बैशाख २०७६, आईतवार ००:४० 151 ??? ???????
काठमाडौं । विगत वर्षझैं यो वर्ष पनि रिलिजमा आएका फिल्ममा समावेश गरिएका केही गीत हिट भएका छन् । जुन गीतहरु पार्टी, पिकनिक, गाडी सबैतिर घन्किइरहरेका छन् । साथै सोसल मिडिया युट्युवमा पनि करोडौं पटक हेरिएको छ । आज हामीले २०७५ को पूर्वसन्ध्यामा आएर केही हिट फिल्मी गीतहरुको बारेमा जानकारी गराउँदैछौं ।
१. गोजीमा दाम छैन–
‘चङ्गा चेट’ फिल्ममा समावेश गरिएको ‘गोजीमा दाम छैन’ गीतलाई दर्शहरुले निकै रुचाएका छन् । यो फिल्मलाई आजको मितिसम्म सोसल मिडिया युट्युवमा चार करोड, सत्र लाख, हजार भन्दा बढी पटक हेरिएको छ । हरिहर तिमिल्सिनाको शब्दमा गीतलाई मेलिना राई र राजनराज शिवाकोटीले स्वरबद्ध गरेका छन् । गीतलाई राजन इशानले एरेञ्ज गरेका हुन् । गीतको भिडियोमा आयुष्मान देशराज जोशी, रविन्द्र झा, सन्दीप क्षेत्री लगाएत कलाकारले फिचरिङ गरेका छन् । फिल्मलाई माधव वाग्लेको निर्माणमा दीपेन्द्र के खनालले निर्देशन गरेका हुन् । फिल्मले बक्स अफिसमा पनि राम्रो ब्यापार गरेको थियो ।
२. पहिलो नम्बरमा–
‘छक्का पञ्जा–३’ फिल्ममा समावेश गरिएको ‘पहिलो नम्बरमा’ बोलका गीतलाई पनि दर्शकहरुले रुचाएका छन् । सोसल मिडिया युट्युवमा यो गीतलाई तीन करोड, ५८ लाख पटक भन्दा बढी हेरिएको छ । राजेन्द्र थापाको शब्द तथा दीपक शर्माको संगीतमा गीतलाई डेविड शंकर र विन्दु परियारले स्वरबद्ध गरेका छन् । गीतको भिडियोमा दीपकराज गिरी, दीपिका प्रसाई, दीपाश्री निरौला, प्रियंका कार्की, स्वस्तिमा खड्का, वर्षा रावत, जीतु नेपाल, केदार घिमिरे लगाएत कलाकारको फिचरिङ रहेको छ । फिल्मलाई दीपाश्री निरौलाले निर्देशन गरेकी हुन् । फिल्मले बक्स अफिसमा वर्षकै सर्बाधिक कमाई गरेको थियो ।
३. फूल होइन–
प्रदीप खड्का र मिरुना मगरको मुख्य भूमिका रहेको फिल्म ‘रोज’मा समावेश गरिएको ‘फूल होइन’ बोलको गीतलाई पनि सर्वाधिक रुचाइएको छ । प्रताप दास र प्रविशा अधिकारीको आवाजमा रहेको यो गीतलाई युट्युवमा दुई करोड, साठ लाख, बैसठ्ठी हजार भन्दा बढी पटक हेरिएको छ । राजेश कुमार श्रेष्ठको शब्द तथा अलिश कार्कीको संगीतमा गीतलाई गोपाल रसाइलीले एरेञ्ज गरेका हुन् । फिल्मलाई आर्या पौडेल र आरोही केसीको निर्माणमा निरक पौडेलले निर्देशन गरेका हुन् । फिल्मले आशा अनुरुप ब्यापार गर्न भने सकेन, तर प्रदीप खड्का र मिरुना मगरको कामको तारिफ भने भयो ।
४. सीओडब्लु काउ–
अभिनेत्री केकी अधिकारीको फिल्म ‘कोहलपुर एक्स्प्रेस’मा समावेश गरिएको गीत ‘सीओडब्लु काउ’ले पनि दर्शकहरुको राम्रो साथ पाएको छ । राजनराज शिवाकोटी मेलिना राईको आवाजमा रहेको यो गीतलाई युट्युवमा एक करोड, चौहत्तर लाख, ६४ हजार भन्दा बढी पटक हेरिएको छ । गीतलाई राजन इशानले एरेञ्ज गरेका हुन् । गीतको भिडियोमा प्रियंका कार्की, केकी अधिकारी, ऋचा शर्मा, रीमा विश्वकर्मा लगाएतको फिचरिङ रहेको छ । फिल्मलाई विशाल भण्डारीले निदेर््शन गरेका हुन् ।
५. उम्लियो भने पोखिन्छ–
जय भोले फिल्ममा समावेश गरिएको गीत ‘उम्लियो भने पोखिन्छ’लाई पनि दर्शकहरुको राम्रो साथ मिलेको छ । युट्युवमा गीतलाई एक करोड ५८ लाख, ६७ हजार भन्दा बढी पटक हेरिएको छ । राजनराज शिवाकोटीको शब्द÷संगीतमा गीतलाई मेलिना राई र राजनराज शिवाकोटीले स्वर भरेका छन् । गीतको भिडियोमा खगेन्द्र लामिछाने, स्वस्तिमा खड्का, सलोन बस्नेत, सौगात मल्ल, बुद्धि तामाङ लगाएतले फिचरिङ गरेका छन् । किरण शर्मा, कृति शर्मा र अंकित शर्माको निर्माणमा फिल्मलाई अशोक शर्माले निर्देशन गरेका हुन् । फिल्मले बक्स अफिसमा राम्रो ब्यापार गरेको थियो ।
६. उडायो हावाले–
रेनेशा वान्तवा राईको डेब्यु निर्देशनमा बनेको फिल्म ‘इन्टु मिन्टु लण्डनमा’मा समावेश गरिएको गीत ‘उडायो हावाले’ले पनि दर्शकहरुको राम्रो साथ पाएको छ । हर्कुलस बस्नेतको शब्द तथा कम्पोजमा गीतलाई निकिता थापा र हर्कुलस बस्नेतले आवाज दिएका छन् । गीतको भिडियोमा धीरज मगर र साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहले फिचरिङ गरेका छन् । युट्युवमा यो गीतलाई एक करोड ५५ लाख, ४१ हजार भन्दा बढी पटक हेरिएको छ । फिल्मले बक्स अफिसमा राम्रो ब्यापार गरेको थियो ।